Kedu ihe m ga-ama banyere nchọpụta ọchụchọ Amazon iji ghọọ ezigbo onye ere?
Onye ọ bụla na-ere ahịa n'ahịa n'Intanet maara ihe na-eme nchọpụta nwere ike ịghọ ntọala siri ike maka azụmahịa na-adaba mbà. Ka anyị chee ihu ozugbo - ahịa ndị ahịa na Amazon chọrọ nyocha na nghọta miri emi, n'ezie, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka edepụta ngwaahịa gị ka mma ma gosipụta ya n'etiti nsonaazụ ọchụchọ kachasị elu. N'ikpeazụ - iji mee ka ị nwekwuo okporo ụzọ site na isiokwu ndị dị mkpa, si otú ahụ na-amụbawanye mgbanwe gị - remotely monitor pc temperature. Ma, ihe ahụ bụ na n'adịghị ka engines ọchụchọ dị mkpa (dịka Google n'onwe ya, yana Yahoo, ma ọ bụ Bing), ọrụ algorithm nke Amazon nwere "ngwaahịa-centric" nke ya. Ọ pụtara na site na echiche nke Search Engine Optimization (SEO), ị na-adịghị atụ aro iji na-ịkụ nzọ tumadi na Google AdWords, ọ dịkarịa ala mgbe ọ na-abịa Amazon Keywords nnyocha. Ihe a bu na isi ihe ndi ozo bu ihe di mma maka ichota ihe ndi choro. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, ngwá ọrụ a enweghị ike ijide data zuru oke dị mkpa iji mee ka nhọrọ isiokwu zuru ezu maka ịchọta ndepụta kachasị mma nke ngwaahịa na-adị n'elu ọchụchọ ahụ.
Ka anyị gbanyekwuo n'ime okwu ahụ ma hụ otú A9 si arụ ọrụ (Amazon's search engine algorithm). N'iburu n'uche na A9 na-eche banyere ịzụ ahịa zuru ezu na nke a n'elu ụlọ ahịa na-ere n'ahịa, ndepụta ya nke SERPs dabeere na isi ihe abụọ bụ isi:
Ihe na arụ ọrụ - pụtara na ihe ọ bụla nwere aha ọma na akụkọ a tụkwasịrị obi n'akụkọ ihe mere eme ga-egosi na ọ ga-egosi na ọ dị nso n'elu ọchụchọ Amazon. Ngwá ọrụ arụmọrụ kachasị bụ CTR (ọnụọgụ-ọnụego), CR (ọnụego mgbanwe), yana ezigbo ahịa net.
Ihe kpatara nke a - na-eche na a ga-ahazi aha ngwaahịa, nkọwa na bullet nke kachasị mma (nke bụ, nke dabara ajụjụ gbara ajụjụ ndị ndị ahịa na-achọ) - ga-enwe ohere siri ike nke gosipụtara n'ụzọ pụtara ìhè na nchọpụta ngwaahịa Amazon.
Ya mere, ka anyị chee ihu na - ọchụchọ ọchụchọ Amazon chọrọ ihe mmadu na-abia (kama karia otua okwu nke di na SEO). Ihe di mkpa bu ihe kwesiri ilebara anya n'ihu ihe obula. Ọ bụ ya mere m ga-eji kwado ịhọrọ ụdị mkpịsị aka dị mma maka Amazon na nyocha nwere ike imeri njikọ ọchụchọ na-eme ka ị nweta ezigbo mgbanwe na ihe ndị ọzọ. Ma, m onwe m jiri Sonar Amazon isiokwu nchọpụta ngwá ọrụ. N'ezie, ọ bụ naanị gị ka ị ga-ahọrọ ngwá ọrụ ma ọ bụ ịntanetị ịhọrọ. Ka o sina dị, na-eji Sonar Enwere m uru ụfọdụ n'ezie, dị ka ịmepụta ndepụta ngwa ngwa nke ntinye ederede dị elu (nke gosipụtara na ọ bụ mmalite dị elu), nchọpụta asọmpi (ịchọta mkparịta ụka ọchụchọ na-eme nchọta-kpọmkwem site n'aka ndị na-ere ahịa dị ezigbo ịtụnanya), nghọta bara uru na ntụgharị uche na ịnweta njikwa ọchụchọ na-atụ aro na ebe a na ugbu a, na ọbụna karịa.